မႏၲေလးတိုင္း (၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရနံ ရွိနိဳင္၍ ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္အျဖစ္ တူးေဖာ္နိဳင္ရန္ ေလ့လာစမ္းသပ္မည္ - Mandalay In-depth
မန္တလေးတိုင်း (၈)မြို့နယ်တွင် ရေနံ ရှိနိုင်၍ ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်အဖြစ် တူးဖော်နိုင်ရန် လေ့လာစမ်းသပ်မည်
Mg Tar နိုဝင်ဘာ 8, 2019 5:46 မနက် 0
နေပြည်တော် တပ်ကုန်းအပါအဝင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်တွင် ရေနံ (Hydrocarbon) ရှိနိုင်၍ ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်အဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ENI ဆိုသည့် အီတလီကုမ္မဏီတစ်ခုက စမ်းသပ်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပ်ကုန်းမြို့နယ်မှစတင်ကာ ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ်၊ သာစည်၊ ဝမ်းတွင်း၊ မြစ်သား၊ ကျောက်ဆည်၊ စဉ့်ကိုင်စသည့် မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေဧရိယာ စတုရန်းမိုင် (၃၁၀၀)ကျော် (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၅၁၀၀)တွင် ရေနံ (Hydrocarbon) တူးဖော်ထွက်ရှိနိုင်ချေ ရှိသည့်အတွက် ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မြေသားစမ်းသပ် လေ့လာခြင်း (Giochemical Survey) လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ကုန်းတွင်းရေနံ လုပ်ကွက်များအဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စမ်းသပ်လေ့လာမည့် မြေနေရာ ။ Photo – ဦးလှိုင်ဝင်း Fb.
ကုန်းတွင်းရေးနံ လုပ်ကွက်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စမ်းသပ်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူများနှင့် အီတလီနိုင်ငံအခြေစိုက် ENI ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများက မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စမ်းသပ်လေ့လာမည့် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများအား ယနေ့ နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်တွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ ဖိတ်ကြားကာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှိုင်ဝင်းက Mandalay In-depth News သို့ ပြောသည်။
“ဒီနေရာတွေမှာ ရေနံထွက်နိုင်တယ်၊ ကုန်တွင်းရေနံလုပ်ကွက် အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး အရင်ကတည်းက ကုမ္မဏီနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနကြား သဘောတူညီချက် ရှိပြီးသားဖြစ်မယ်။ အခုကတော့ Geo-Chemical (မြေသားဓါတုအခြေအနေ) လေ့လာမှာပေါ့။ ကုမ္မဏီက သူတို့ စမ်းသပ်လေ့လာမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြတာ”ဟု ဦးလှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
ကုန်းတွင်းရေနံ လုပ်ကွက်များအဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မြေသား စမ်းသပ်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပနေစဉ်။ Photo – ဦးလှိုင်ဝင်း Fb.
ကုန်တွင်းရေနံလုပ်ကွက်များ အဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်ရန် အထက်ပါ မန္တလေးတိုင်း (၈)မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ(၃၇၀)ကျော်တွင် နောက်ဆုံးအဆင့် မြေသား စမ်းသပ်လေ့လာမည် ဖြစ်ပြီး ကုမ္မဏီအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များကတည်းက စမ်းသပ်လေ့လာနေဟန် ရှိကာ လက်ရှိတွင် စမ်းသပ်လေ့လာမည့် ကျေးရွာအရေအတွက်နှင့် နေရာများ ပါရှိလာပြီးဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“သူတို့လုပ်မယ့် ဆာဗေး (Survey)က ကောင်းပါတယ်။ Air Bomb တွေ ဘာတွေ မသုံးဘူးဆိုတော့ မြေသားတုန်ခါတာတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ သူတို့က စက်နဲ့မြေကို နှစ်ပေလောက်ဖောက်မယ်၊ ပြီးရင် တိုင်းတာမယ့် စက်ပါတဲ့ ပိုက်ပျော့လေးကို (၂၁)ရက် မြေထဲမြုပ်ထားမယ်။ အဲ့တာကိုမှ ပြန်ပြီး အဖြေထုတ်မှာပေါ့”ဟု ဦးလှိုင်ဝင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ပုဂံနှင့် ငါးသရောက်မြို့နယ်ခွဲများနှင့် ထိစပ်နေသည့် မြေနေရာအချို့တွင် အသေးစား ကုန်းတွင်းရေးတူးဖော်မှုများ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။
ENI ကုမ္မဏီသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများ အဓိကလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္မဏီဖြစ်ပြီး အီတလီအစိုးရက အစုရှယ်ယာအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ကာ ကုမ္မဏီ ရုံးချုပ်မှာ ရောမမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းကုမ္မဏီသည် နိုင်ငံ(၇၉)နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်စာရင်းအရ ဈေးကွက်အရင်းအနှီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ(၉၀)ရှိကာ ကမ္ဘာ့(၁၁)ခုမြောက် အကြီးဆုံးကုမ္မဏီဖြစ်သည်။
ကုန်းတွင်းရေနံ လုပ်ကွက်များအဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် မြေသား စမ်းသပ်လေ့လာမည့် မြေနေရာ ။ Photo – ဦးလှိုင်ဝင်း Fb.
ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္မဏီများစာရင်းတွင် Exxon, Shell, Chevron, Total စသည့် ကုမ္မဏီများနောက် ကမ္ဘာ့အဆင့် (၈)နေရာတွင် ရှိသည်ဟု ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုန်းတွင်းရေနံ လုပ်ကွက်များအဖြစ် တူးဖော်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စမ်းသပ်လေ့လာမည့် မြေနေရာ။
One thought on "မန္တလေးတိုင်း (၈)မြို့နယ်တွင် ရေနံ ရှိနိုင်၍ ကုန်းတွင်းရေနံလုပ်ကွက်အဖြစ် တူးဖော်နိုင်ရန် လေ့လာစမ်းသပ်မည်"
class="comment even thread-even depth-1"3
U Win Pe says:	နိုဝင်ဘာ 8, 2019 ရက်နေ့ 8:36 မနက်